musha nyika dzakabatana Mabhokisi Floyd Mayweather Nyaya Yehuduku Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeBhokisi Bhokodhi uyo anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita “Mari”. Yedu Floyd Mayweather Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti haana kumbobvira anyora kukundwa panguva yake yehunyanzvi tsiva basa (sepanguva yekunyora). Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Floyd Mayweather's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Floyd Mayweather Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Floyd Joy Mayweather akazvarwa pazuva re24th raFebruary 1977 muGrand Rapids Michigan, United States.
Akazvarwa kuna amai vake Deborah Sinclair (ainetseka kupindwa muropa nezvinodhaka panguva iyoyo) uye kuna baba vake Floyd Mayweather Sr (aimbove nyanzvi tsiva uye mutengesi wezvinodhaka).
Mudiki Floyd akakurira nemhuri yake isinganyatsoita basa mumaghetto eGreat Rapids, nzvimbo nhema yaive 1600 mamaira kubva kuLas Vegas kuMichigan.
Iyo ghetto yaive ine mukurumbira wehurombo, zvinodhaka uye mhosva zvakaratidza hupenyu hwevagari vayo mukati mayo mhuri yaMayweather yakanga isiri iyo yega.
"Dai iwe usina kunzwa pfuti mukati mevhiki ungazoshamisika kuti chii chaiitika".
Akayeuka Floyd wekurerwa kwake muGreat Rapids.
Kuwedzerwa kuhunhu hwehunhu hweghetto kwakaputswa dzimba uye kupokana kwemhuri uko maMayweather 'aive nemugove wavo wakanaka.
Nepo babamunini vababa vaMayweather Jeff naRoger vakashanda sevabati vepamhizha vanobudirira, babamunini vake amai, Baboon vaive vari kunetsana naMayweather Sr waakambotsvaga kuuraya nepfuti pamusoro pemombe yemombe.
Zvisinei, Mayweather Sr akadzivisa izvo zvingadai zvakave kufa kwake kusingatarisirwi nekushandisa mwanakomana wake (mucheche Floyd) senhoo yemuviri.
Zano rekuzvidzivirira rakasiya Baboon isina imwe nzvimbo yekutandarira kunze kwekungopfura vatezvara vake mugumbo, zvichiunza mavhiki ekupesana kwavo kupera.
“Ndakashandisa murume wangu (mucheche Floyd) nekuti dai ndisina, ndingadai ndisiri pano nhasi. Ndakanga ndichiri kupfurwa mugumbo. Ungaitei nepfuti pauri?.
Floyd ndiyo yega nhoo yangu, uye ndakapfurwa naye muruoko rwangu. Baboon rakapfura gomba ziguru rakakura mugumbo rangu, uye ndiri kukuudza kuti raizove mumusoro mangu kana muchipfuva changu ”.
Yakarondedzerwa Floyd Mayweather Sr panguva yehupenyu reRBC reRadio muHTML.
Floyd Mayweather Biography - Basa Kuvaka:
Bhokiseni yaive chikamu chakakosha chehupenyu hwaFloyd pasina nguva refu atanga kufamba. Baba vake vaiwanzomubata pamberi pemabhegi ekumhanya pese pavaishanyira jimu.
Mwedzi yakati gare gare, mukomana mudiki aikanda zvibhakera pane chero chinhu chakauya.
Hukama hwepakutanga hwaive naFloyd nababa vake vakatora nguva yakati wandei saMayweather Sr aimbomhanya nekuda kwemabasa ake ekutengesa zvinodhaka. Nekudaro, Floyd ane makore 8 akatanga kugara naamai vake muNew Jersey kwaakakurira pamwe nehanzvadzi dzake.
Mayweather Snr aisazivikanwa semunhu atiza. Aiwanzozviratidza kudzidzisa mwanakomana wake uyo akazova mutambi wetsiva anotevera kubvumidzwa naambuya vake.
“Ndinofunga ambuya vangu vakaona kugona kwangu kutanga. Pandakanga ndiri mudiki, ndakamuudza 'Ndinofunga ndinofanira kuwana basa.' Iye akati, 'Aiwa, ramba uchingoita tsiva'. ”
Floyd Mayweather Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
1993 raive gore rinosuwisa uye rakakosha kuna Floyd uyo baba vake vakapedzisira vasungwa nekutengesa cocaine. Kubudirira kwacho kwakapotsa kwapedza mushandirapamwe waFloyd weNational Golden Gloves Championship muna1993.
Nekudaro, babamunini vaFloyd, Roger (akahwina mukwikwidzi wepasi rese we featherweight) akapinda kuzadza nzvimbo iyi semudzidzisi wake.
Nekuda kweizvozvo, Floyd akahwina Mukwikwidzi gore irowo pamwe nekuchinjisa mu1994 na1996 nerubatsiro rweababamunini vake avo vakazova simba rekufambisa mune rake basa.
Hazvina kutora nguva refu Floyd kufambira mberi kwekutanga muamateur tsiva akamuona aburitswa muOttawa High School baba vake vachiri kushanda nguva mutirongo.
"Ndakaziva kuti ndaizofanira kuedza kuchengeta amai vangu uye ndakaita sarudzo yekuti chikoro hachina kukosha panguva iyoyo uye ndaizofanirwa kubheja kuti ndiwane raramo".
Akazotsanangura zvakare pamusoro pechisarudzo.
Kusununguka kubva kuchikoro chesekondari kwakaita Mayweather zvakanyanya kuisa mubhokisi kuti simba rake rokurwisana rakamukunda iye pamba mumutambo weOlymic Olympic uyo wakamirira United States kuAtlanta.
Ndichiri kurwira mumhete muAtlanta, Floyd akatsvaga hunyanzvi uye rutsigiro rwemhuri yake kuti zviitwe kuburikidza nematanho akasiyana zvisinei nekuvapo kwevarairidzi veNational, chokwadi chaakayeuka gore rakatevera nenzira inotevera;
“Pandakanga ndiri mhete kumitambo yeOlympics, aive mazwi ababa vangu andaive ndichinzwa, kwete evarairidzi '. Handina kumboteerera zvakataurwa nevarairidzi. Ndaifonera baba vangu vondipa mazano kubva kujeri. ”
Kunyange zvazvo Floyd akagara nemari yemhangura pasi pemakakatanwa, akabudirira pakuita kuti ave nemafungiro panguva ye19 uye akanga akagadzirira kuva muchengeti weboro.
Maererano naye, hondo dzaaiva nadzo semusikana dzakaratidza kuti aida mari yebhokisi, saka chido chekuva mudzidzisi.
“Ini ndinofunga ndakatoratidza kare kuti ini ndanga ndisiri kungorwira mari, nekuti ndakarwa semutambi. Ndakarwa hondo makumi mapfumbamwe pasina muripo. ”
Floyd Mayweather Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira:
Floyd akashandura hunyanzvi pa11th yaGumiguru 1996 paakatanga kuita kwake uye akagogodza mumwe mutsva Roberto Apodaca munharaunda yechipiri yehondo yavo.
Neraki, Mayweather Snr akaburitswa mutirongo (mushure mekurwa kwaMayweather yegumi nemana) uye akatora basa rinokudzwa semudzidzisi wemwanakomana wake uye maneja.
Kurwisana semuongorori akaona Floyd rekodhi rakakunda mushure mokukunda mukupedzisira mukukunda kwake 1998 pamusoro paGenaro Hernandez kutora zita rake rekutanga renyika, wBC chamakwikwidzi makuru evanhu. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Floyd Mayweather Rudo Hupenyu:
Floyd haasati amboroora nekuda kwekutenda kwake kuti varume vanofanirwa kuve nevakadzi vakawandisa sezvavanogona.
Nekudaro, shasha yepasirese ine hukama hwakawanda. Tinokuunzira mashoma ehukama hwake hwakakurumbira.
Ukama naJosie Haris: Floyd naJosie vakatanga sevanodzidza chikoro chesekondari uye vane ukama hwakareba kwazvo pamwe chete.
Ivo vaviri vakapinda muchato mune imwe nguva mu2005 asi havana kumbobvira vakaroora nekuda kwemudyandigere nyanzvi boxer uzivi nezvekuva nevakadzi vazhinji.
Mukuwedzera, Floyd ane nhoroondo yakareba yekurova Josie uye muna 2012, akapedza mwedzi mitatu mujeri nekuda kwekushungurudzwa kwepamba muna 3.
Hazvina kutora nguva refu Josie akasheedza kuti irege uye akatamira kuValencia Calif nevana vatatu vavaive navo pamwechete. Vana vanosanganisira Koraun Mayweather (akazvarwa muna Ndira 3, 29),
Ziyoni Shamaree Mayweather (akaberekwa muna March 28, 2001),
uye Jirah Mayweather (akaberekwa muna June 25 2004).
Ukama naMelissa Brim: Floyd akatanga kufambidzana naMelissa mu1998 paakanga achiri muukama naJosie.
Ukama hwavo hwakanga hwakasiyana nezvakaitwa naColyd naJosie saMelissa vakawana chikamu chakanaka chekushungurudzwa kwemhuri vasati vadana iyo inopera. Vaiva nemwanasikana pamwe chete ainzi Iyanna Mayweather (akazvarwa muna May 20, 2000).
Floyd Mayweather Hupenyu Hwemhuri:
Mayweather akaberekerwa mumhuri isingabatsiri, tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvababa vake. Baba vaFloyd Mayweather Sr vaimbova mutambi wetsiva uye welterweight mukwikwidzi.
Kunyangwe Mayweather sr aiita zviitiko zvematsotsi kunze kwemhete, aigara achiwana nguva yekusimudza Floyd nenzira yeSpartan senge shasha yeWBO yaizorangarira;
“Handiyeuki achinditora kuenda neni kana kuita chero chinhu chingaitwa nababa nemwanakomana, kuenda kupaki kana kumamuvhi kana kunotora ice cream.
Ndakagara ndichifunga kuti aifarira mwanasikana wake (mukoma waFloyd) zvirinani kupfuura zvaaindifarira nekuti haana kumbobata shamhu uye ndairohwa nguva dzose. ”
Mayweather Snr ndiye zvakare baba kune vanun'una vaFloyd vanosanganisira Deltricia Tawanna Howard, Fatimah Mayweather naJustin Jones.
Pamusoro paamai vake: Amai vaFloyd, Deborah Sinclair akarwisana nekushungurudzwa kwezvinodhaka. Kunyange zvakadaro, aive padhuze kwazvo naFloyd uyo waaida zvakanyanya kuti ave nehupenyu husingakanganwike.
“PaKisimusi, hatina kumbova neKisimusi. Amai vangu vaibuda vondibira zvipo. Akaedza asi zvainge zvakaoma uye ndosaka ndichimutarisa izvozvi ”.
Akamanikidzika mhare isingasviki.
Floyd anoda amai vake muchiyero chakafanana uye ikozvino akazvipira kuve nechokwadi chokuti anofarira hupenyu hwehupenyu hwakamupa zvipo zvakawanda kumukuru wake.
Nehanzvadzi yake yehafu: Floyd ane hafu-munin'ina Justin Jones uyo akabatana nemhuri yeMayweather semunhu ane makore gumi nematanhatu amateur boxer.
Justin akakura asina kana zano rekuti baba vake vaive ani kusvikira vanhu vamuita kuti azive kuti aitaridzika saMayweather. Achida kuziva kuti midzi yake ndeipi, Justin aive neDNA bvunzo iyo mhedzisiro yakaenzana neyaMayweather Snr.
Kubva pakusangana zvakare, Mayweather Snr akatora kurairidzirwa kwevakarasikirwa asi akawana mwanakomana ane chikonzero chokuita imwe mhare yenyika kubva maari.
Nehanzvadzi dzake: Chinyanyozivikanwa nezveMafuta madzishe vatatu vanorarama hupenyu hwehupenyu hwega. asi, ivo vane ukama hwepedyo naye.
Hanzvadzi idzi dzinosanganisira Fannie Orr,
uye Fatimah Mayweather.
Floyd Mayweather Mazita emazita:
Mayweather Jr ane mazita emadunhurirwa maviri chete anosanganisira “Mukomana akanaka" Uye "Mari ”. Floyd akanzi "Akanaka Mukomana" mukati memazuva ekutanga ebasa rake retsiva nekuti vanhu vakacherechedza kuti nguva dzose aibva kuhondo dzake pasina ruvara kana kupwanya.
Kune rimwe divi, akawana zita remadunhurirwa rekuti 'Mari' mushure mekunge akamboseka mari nekukodha kamera. Floyd anosarudza "Mari" sezita remadunhurirwa nekuti anozviona sekuvandudza kweyaimbova. Achitaura panguva yemusangano wenhau akatsanangura kuti:
"Iwe haugoni kuva pamusoro pe35-year-old uye uzviti 'Pretty Boy.' Zvakanaka, saka Mari inobatsira zvikuru.
Floyd Mayweather Bio - Zvakaoma Mukuverenga:
Floyd aive mu2014 akamanikidzwa kupindura zvinopomerwa zvakaitwa rapper 50 Cent uye nhepfenyuro yeNew York iyo yaasingagone kuverenga zvakanaka.
Kupomerwa uku kwakaitwa mushure mekucherechedzwa kuti 'Munhu weMari' anokwanisa kuverenga mazwi ekutanga asi kwete mitsara yakaoma. Achipindura, Floyd aikwanisa kushomeka nekugona kuverenga nekunyora uye akazvidzivirira nenzira inotevera:
“Kuverenga hakuzotsanangure nzvimbo yangu munhoroondo yetsiva. Mwari haanganditendere kudenga here nekuti ini handina kuverenga sechibatiso chenhau? Tarisai, ndingadai ndiri munhu akakwana pakuverenga dai iri nzira yandairarama nayo nekupa mhuri yangu chikafu. ”
Nepo zvichitendwa kuti danho raFloyd rekusiya chikoro kubva pakutanga ndiro rinokonzeresa kushomeka kwake pakuverenga, shasha haizvitore nyore kune chero munhu anomushora mune izvi.
Floyd Mayweather Zvemunhu Chokwadi:
Floyd ndomumwe angamira chero pasina chinhu kuti awane chaanoshuvira. Izvi zvinoonekwa munzira iyo yaakave asina kukundwa 12-nguva yepasirose mutambo wetsiva mumakirasi mashanu ehuremu ane 50-0 rekodhi.
Iyewo ane hushoma mukupa zvipo zvinodhura kune avo vaanoona padhuze naye.
Paflip, Anononoka kuva negodo uye anogara achitsamwa kana achitsamwisa. Kunyanya zvakadaro, anovenga kuvatsoropodzwa
Floyd Mayweather Anocherechedzwa Chokwadi:
Muna 2008, Floyd Mayweather akarwisa uye akakunda The Big Show muWWE. Floyd yakawana iyo feat pasinei nemusiyano mukuru munzvimbo dzavo dzakakwirira.
Floyd Mayweather is Justin Bieber's boxing coach. Justin uyo anowanzoonekwa achiremberedzwa pamwe neveMeweweather ane zvigaro zvepakati paMafydds anorwa.
Muna 2000 Floyd akatsiva baba vake naJames Prince kuti ave maneja wake mutsva. Hazvina kutora nguva refu asati adzingawo Mayweather Sr semurairidzi wake, achimutsiva nababamunini vake Roger (inoratidzwa pazasi) nekuti vaive nemakemikari ari nani.
Mayweather haafambi nevarume vake vese vechengetedzo mundege imwe nekuti anotya kuti huremu hwavo hunogona kutadzisa kufamba kwakachengeteka.
Mayweather ane knuckle uye metacarpal matambudziko nekuti maoko ake ari mashoma, akagashira kurovera pamusoro pemakore. Nekudaro, ivo vava vakapwanya uye vanogona kukuvara.
Floyd Mayweather Mabhizinesi:
Nebhokisi rakaratidzika riri shure kwake, Floyd atanga kuisa mari yake mukushandisa zvakanaka nekuita mari inobatsira. Zvinonyanya kuzivikanwa pakati pezvikwereti ndezvi:
Mayweather Boxing + Fitness: Izvi zvine akateedzana ejimunasiums yemabhoksi-akavakirwa makosi akasimba pakati pezvimwe zvinoedza kugwinya. Iwo makirasi anosanganisira iyo chaiyo chaiyo yekurovedza muviri chiitiko icho chinopisa kusvika mazana matatu emakori mukati maminetsi makumi maviri chaiwo.
Beyond gyms, Mayweather ane mari inorema mukutengesa zvivakwa, ane kirabhu yekubvisa muLas Vegas inonzi Girl Unganidzo, kutungamirirwa ne tech inoshandiswa, akatanga kambani yake yekusimudzira (Mayweather Promotions), uye akatanga iyo Mari Chikwata, chiratidzo chinotengesa ngowani nehembe online. Chokwadi, ari kurarama zvinoenderana nezita rake remadunhurirwa rekuti "Mari".
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Floyd Mayweather Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!